Léon: The Professional (1994) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
1994ခုနှဈတုနျးက ထှကျရှိခဲ့ပွီး လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ရုပျရှငျကားဖွဈပါတယျ…Star Wars, Black Swan, Thor အစရှိတဲ့ဇာတျကားတှထေဲကမငျးသမီးခြော Natali Portman ကို ဆယျကြျောသကျဂြှတျဆတျဆတျ အထာလေးနဲ့တှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ…ဇာတျလမျးပုံစံကတော့ Leon ကအရမျးကြှမျးကငျြပွီးသှေးအေးတဲ့ ကွေးစားလူသတျသမား တဈယောကျပါ။တဈနမှေ့ာ မူးယဈဆေးကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မိသားစုတဈခုလုံး အသတျခံလိုကျရတဲ့အိမျနီးခငျြး ဆယျကြျောသကျကောငျမလေး Mathilda ကို အမှတျမထငျ ကယျတငျပေးဖို့ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
လကျတုံ့ပွနျခငျြတဲ့ Mathilda လေးက Leonဆီကလူသတျပညာကို သငျယူပါတော့တယျ…လူငယျပီပီ ပှငျ့လငျးပွီး တဇှတျထိုးနိုငျတဲ့ Mathilda လေးကွောငျ့Leon ရဲ့အေးစကျနတေဲ့ နှလုံးသားက နှေးထှေးတဲ့ခဈြခွငျးကိုခံစားမိလာခြိနျမှာတော့..ဦးလေးကွီးနဲ ဆယျကြျောသကျကောငျမလေးတို့ရဲ့စုံတှဲ ခပျကွမျးကွမျး အကျရှငျတှသောမကသူတို့နှဈယောကျကွားက စဈမှနျတဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတရားကိုပါ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာပါ…ရသမြိုးစုံကို ပေးနိုငျတဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈတဲ့အပွငျဇာတျလမျးပွီးသှားခြိနျထိ ရငျထဲမှာ တဈခုခုကနျြခဲ့မှာ အသအေခြာပါပဲ….
1994ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်…Star Wars, Black Swan, Thor အစရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲကမင်းသမီးချော Natali Portman ကို ဆယ်ကျော်သက်ဂျွတ်ဆတ်ဆတ် အထာလေးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ Leon ကအရမ်းကျွမ်းကျင်ပြီးသွေးအေးတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမား တစ်ယောက်ပါ။တစ်နေ့မှာ မူးယစ်ဆေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အိမ်နီးချင်း ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေး Mathilda ကို အမှတ်မထင် ကယ်တင်ပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လက်တုံ့ပြန်ချင်တဲ့ Mathilda လေးက Leonဆီကလူသတ်ပညာကို သင်ယူပါတော့တယ်…လူငယ်ပီပီ ပွင့်လင်းပြီး တဇွတ်ထိုးနိုင်တဲ့ Mathilda လေးကြောင့်Leon ရဲ့အေးစက်နေတဲ့ နှလုံးသားက နွေးထွေးတဲ့ချစ်ခြင်းကိုခံစားမိလာချိန်မှာတော့..ဦးလေးကြီးနဲ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတို့ရဲ့စုံတွဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အက်ရှင်တွေသာမကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားက စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုပါ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ…ရသမျိုးစုံကို ပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ဇာတ်လမ်းပြီးသွားချိန်ထိ ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုကျန်ခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ….
Adam Busch Alex Dezen Arsène Jiroyan Betty Miller Carl J. Matusovich Cary Wong Christophe Gautier Danny Aiello David Gregg David W. Butler Didier Legros Don Creech Elizabeth Regen Ellen Greene Eric Challier Frank Senger Fred Fischer Gary Oldman Geoffrey Bateman George Martin Gilles Kleber Hervé Husson Jean Reno Jean-Hugues Anglade Jeff McBride Jernard Burks Jessie Keosian Joseph Malerba Junior Almeida Keith A. Glascoe Kent Broadhurst Luc Bernard Lucius Wyatt Cherokee Maïwenn Marc Andréoni Mario Todisco Matt De Matt Michael Badalucco Michael Mundra Michael Wehrhahn Michel Montanary Natalie Portman Peter Appel Peter Linari Peter Vizard Randy Pearlstein Robert LaSardo Samy Naceri Sonny Zito Steve Gonnelo Stuart Rudin Tommy Hollis Willi One Blood William James Stiggers Jr.
Option 1 server.mfile.cloud 630 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 630 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 630 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 630 MB SD (480p)
Option9yuudrive.me 2.9 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 10 sharer.pw 2.9 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 11 server.mfile.cloud 2.9 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 12 storage.msubmovie.com 2.9 GB FHD (1080p) AC3 5.1